Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. निजामति कर्मचारीप्रति सरकार कठोर – Emountain TV
काठमाडौं, २९ कात्तिक । निजामती कर्मचारीविरुद्ध सरकार कठोर हुने भएको छ । निजमाती सेवामा रहँदा वा अवकाश पाएपछि पनि सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पेन्सन नै रोक्ने गरी सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएमा पेन्सन नै रोक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । पूर्वप्रशासकहरुले सरकारको यो कदमलाई सरकार डराएको संज्ञा दिएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत व्यवस्था गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको विरुद्धमा सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ ।
निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा अहिले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यो व्यवस्थालाई पास गरेको छ । यो विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा राज्य वा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएमा पनि निवृति भरण रोकिने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको उपदफा १ क मा निजामति कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोकिने अवस्था अन्तर्गत चार वटा अवस्था व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्र्तगत बुँदा नं. घ मा ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत् सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्व कर्मचारीहरुले पाउने निवृतिभरण उसले आफ्नो कार्य समयमा गरेको कामको सम्मान स्वरुप हो । तर अहिले पूर्वकर्मचारीलाई सरकारको समर्थन गर्ने समुहको रुपमा राख्न खोजेको देखिन्छ । कानुनका जानकार भने यो व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताउँछन् ।
निजामति कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन पनि विधेयकमा राखिएको यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छ ।
अहिलेको व्यवस्थाले अवकाश प्राप्ति पछि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा निजामति कर्मचारीले सरकारले नराम्रो नै काम गरे पनि समर्थन जनाउनु पर्ने बाध्यता रहन्छ । सर्वसाधारण पनि सरकार निरंकुश बन्न लागेको बताउँछन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयकपछि सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनताप्रति कठोर विधेयकहरु ल्याइरहेको छ । अवकाश प्राप्त भएपछि सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न नै डराउने अवस्था सिर्जना गर्नुले सरकार आफ्नो कमजोरी लुकाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । अर्कोतिर संविधान प्रदत्त अधिकारको धज्जी उडाउन सरकार उद्यत हुन नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।